Ungayicima njani iAkhawunti yam kwiWebhu yeTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 401
ukuba cima iAkhawunti yakho kwiWebhu, Umsebenzisi we-Twitter: Ifuna ukungena kwiakhawunti yakho yePeriscope, cofa kwi icon yeprofayile yakho kwaye ukhethe Useto kwimenyu ephumayo, cofa ku Yenza iakhawunti isebenze.
Emva kokucofa Yenza iakhawunti, ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yababini ivela kwiscreen, umsebenzisi we-Twitter ucofa uvale iAkhawunti ukuqinisekisa ukungasebenzi kweAkhawunti. Nje ukuba inkqubo igqityiwe, uMsebenzisi akasenayo iakhawunti esebenzayo ye-Twitter.
Xa umsebenzisi we-Twitter ekhetha ukungasebenzi kwiakhawunti, uyabuzwa isiqinisekiso sesigqibo sakho ukwenza kungasebenzi. Ukuba ukhetha ukukhuphela iiDatha zoBuntu, isikhombisi sokulayisha siyavela ngelixa isicelo sakho senziwa; Ugqibile isicelo sakho kwaye uqala ukukhuphela ifayile kunye nedatha yakho.
Phuma kwiAkhawunti yam yePeriscope
Ukuba uMsebenzisi we-Twitter ulahlekelwe siselfowuni kwaye kufuneka uphume kwiAkhawunti yakho yePeriscope; Ukulungiselela le njongo, kuya kufuneka ulandele le nkqubo: Landela amanyathelo nge-iOS okanye isixhobo se-Android; Ukuba ungene kwiPeriscope ngeAkhawunti yeTwitter, yiya kuseto lwe-Twitter kwiPC yakho.
Khetha Rhoxisa ukufikelela okuhambelana nePeriscope; Khetha ukurhoxisa ukufikelela kwi-Twitter kwi-iOS okanye kwi-Twitter ye-Android, oku kuxhomekeke kwisixhobo anaso uMsebenzisi. Emva kokukhuphela usetyenziso lwePeriscope kwiselfowuni yakho entsha, ngena kwiAkhawunti yakho yePeriscope.
Okokugqibela, khetha iProfayile, Ukucwangciswa nokuValwa iseshoni kuzo zonke izixhobo. Ngoku ukuba uMsebenzisi we-Twitter uthobele yonke inkqubo yokuphuma kwiAkhawunti yakhe yePeriscope, unokukhetha ukungena kwiselfowuni yakhe entsha.
YENZA ISITRITI SESITITTER
ukuba yenza uMsinga, Umsebenzisi we-Twitter kufuneka: Cofa kwiTobhu yoThumelo, cofa ku Yenza ukuhambisa, faka iindawo ezifunekayo: Igama lokuhambisa, Udidi: Ungaluchaza njani usasazo lwakho? kunye nomthombo.
Umsebenzisi we-Twitter ufuna ukukhetha ifayile ye- Ukhetho lokuva: Esidlangalaleni okanye sabucala; khetha iShedyuli ukhetho: Qala kwangoko okanye uqale kamva; vula izicwangciso eziPhambili; vula izithintelo zomxholo: Bandakanya okanye Ungafaki.
Shumeka ividiyo ukusuka encoder ukuya emthonjeni kwaye ujonge ukuba umbonisi womboniso wevidiyo uyayibonisa na; Ukuchofoza ukudala ukuThumela, uMsebenzisi we-Twitter unokhetho lokukhetha: Qala ngokukhawuleza okanye uqale kamva.
Tweet kwaye uphelise ukuhanjiswa kwi-Twitter
Kwiqonga le-Twitter, uMsebenzisi unokukhetha Thumela usasazo, ukuthobela le nkqubo ilandelayo: Cofa kwiTobhu yoThumelo; cofa kusasazo olukhoyo; Cofa kwiqhosha le-Tweet kwaye ulungele ukuya kwi-Intanethi.
Malunga Phelisa ukuGqithisela, Umsebenzisi we-Twitter kufuneka alandele le nkqubo: Cofa kwiTobhu yoThumelo, cofa kunikezelo esele lukhona, yiya ezantsi kwefestile yokuchonga ukuhambisa.
Ukuvala, umsebenzisi we-Twitter ucofa kwi Gqibezela iqhosha; Nje ukuba zonke iimfuno zenkqubo zifezekiswe, ukuhanjiswa kwayo kuya kwenziwa kwakhona kwi-Twitter ukonwabela bonke abasebenzisi be-Twitter kwiqonga le-Twitter.
1 Phuma kwiAkhawunti yam yePeriscope
2 YENZA ISITRITI SESITITTER
3 Tweet kwaye uphelise ukuhanjiswa kwi-Twitter